नेविसंघमा महाभारत :चार गुटका सोह्र नेता अध्यक्षका दाबेदार ! – YesKathmandu.com
अनेक उल्झनका कारण नौ वर्षसम्म रोकिएको नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आज उद्घाटन हुदै छ । महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुग्न अध्यक्षमा मात्र १६ जनाले दावी गरेका छन् ।अहिले प्रत्यक्ष रुपमा चार वटा गुट मैदानमा देखिएको छ ।
पार्टी सभापति देउवा,रामचन्द्र पौडेल,गगन थापा र कृष्ण सिटौला गुट देखिएकै थियो । यही बीचमा खुमबहादुर खड्काको गुट समेत देखा परेको छ । यि चार गुटबाट सोह्र विद्यार्थी नेता अध्यक्षको आकाक्षी देखिएका छन ।
पार्टी सभापति देउवाले नेविसंघको निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेका छन । यही कारण उनी नेविसंघको महाधिवेशन अगाडि मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार नगरी बसेका छन ।
यतिबेला अध्यक्षमा मात्र १६ जना उम्मेद्वार देखिएका छन् । मनोजमणी आचार्य, जितजंग बस्नेत, दीपक भट्टराई, नैनसिहं महर, आनन्द त्रिपाटी, कुन्दनराज काफ्ले, निलकण्ठ रिजाल, शुभराम बस्नेत, रत्न कार्की, क्षितिज भण्डारी, राजीव ढुंगाना, लक्ष्मण आचार्य, रामप्रसाद अधिकारी, अमृत पन्थी, दीपक भण्डारी, सरोज थापा, विनीता अधिकारीलगायतले अध्यक्षमा दावी गरेका छन् ।
यसभित्र पनि चार खेमा विभाजित जस्तो देखिएको छ । पुरानो संस्थापन मानिएको पौडेल–कोइराला, नयाँ संस्थापन मानिएको देउवा, तेस्रो धार मानिएको सिटौला र चौथो खेमाका रुपमा खुमबहादुर खड्काले आ–आफ्ना उम्मेद्वारको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
पौडेल–कोइरालाबाट मनोजमणी आचार्य, दीपक भट्टराई, आनन्द त्रिपाटी, निलकण्ठ रिजाल, रामप्रसाद अधिकारी, विनीता अधिकारी, लक्ष्मण आचार्यलगायत छन् ।
यस्तै देउवा खेमाबाट नैनसिहं महर, जितजंग बस्नेत, रत्न कार्की, सरोज थापा, राजीब ढुंगाना लगायतको नाम चर्चामा छ ।
यता सिटौला खेमाबाट कुन्दनराज काफ्ले अध्यक्षको तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्तै चुनावी माहोल तातिएसँगै शुभराम बस्नेतलाई देउवा खेमाले बेवस्था गरेको भन्दै खुमबहादुर खड्काको निकट रहेर अध्यक्षको तयारी गरिहेको बुझिएको छ ।
कुन नेताको आर्शिवाद कस्लाई ?
रोल्पाबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका आचार्य विगत दुई दशक देखि क्रियाशिल छन् । पटक–पटक केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेका आचार्य वि.स. २०५२ देखि ०५७ सम्म संघको रोल्पा अध्यक्षमा बसेर काम गरेका हुन् । संगठनलाई चलयमान बनाउने अनेकौं एजेण्डा लिएर मैदानमा रहेका आचार्यलाई पौडेल–कोइराला खेमाबाट आधिकारिक उम्मेद्वार बनाउने निश्चित भएको विद्यार्थीहरुमाझ चर्चा छ ।
ललितपुरका स्थायी बासिन्दा जितजंग बस्नेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर तीन पटकसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका बस्नेत नेवि संघको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका दरिला उम्मेद्वार हुन् । शैक्षिक संस्थामा गुण्डागर्दी, चन्दा असुली र दादागिरीको अन्त्य गर्दै गुणस्तरिय शिक्षाका अनेकौं एजेन्डा लिएर उनी चुनावी मैदानमा छन् ।
अर्काे प्रत्यासी हुन नीलकण्ठ रिजाल । मनोजमणी र उनी रामचन्द्र पौडेल खेमाबाट अध्यक्षका दाबेदार छन । यद्यपि रिजाल आफूलाई कुनै पक्षको भन्द्या पनि विद्यार्थीको गुटको भन्न् रुचाउछन । ‘हाम्रो नेविसघं संगठित र प्रशिक्षित नेविसंघ ’ राजनीतिक, शैक्षिक र सागंठनिक सुधारका एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरेको छु । विशेषगरी म सागंठनिक सुधारका योजनाहरुलाई अगाडि सार्दै चुनावी मैदानमा होमिएका उनी सागंठनिक सुधारका निम्ति समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकालको गरी तीनवटा एजेन्डाहरु बोकेर मैदानमा होमिएका छन ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने महर विद्यार्थी माझ लोकप्रिय छन् । पटक–पटक केन्द्रीय समितिमा बसेर सक्रियताका साथ काम गरेका महर डडेल्धुराबाट विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् ।
करिब दुई दशक देखि निरन्तर नेवि संघको क्रियाशिल राजनीतिमा लागेका दिपक भट्टराई ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि बलिया उम्मेद्वार हुन् । निरन्तर तीन कार्यकालसम्म केन्द्रीय समितिमा बसेका काम गरेका भट्टराईलाई पौडेल–कोइराला खेमाकै आर्शिबाद छ ।
नेविसंघको पूर्व कोषाध्यक्ष भइसकेका कुन्दनराज काफ्ले पशुपति क्याम्पसबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेर विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । सिटौला खेमाबाट बलिया उम्मेद्वार मानिएका छन ।
११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रमुख दावेदार मध्येमा त्रिपाठीको नाम पनि चर्चामा छ । चर्चामा छ । नेपाली कांग्रेसमा प्रभावशाली भूमिका राख्ने नेता खुमबहादुर खड्का र पौडेल–कोइराला खेमाको साथ पाएको दावी गर्ने त्रिपाटी आम विद्यार्थीलाई एउटै मुलधारमा ल्याउने अभियानका साथ चुनावी मैदानमा छन् ।
मतगणनाको पछिल्लो परिणाम१८० स्थानमा एमालेको १२२
पशुपतिको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई : तीन हजार प्रहरी परिचालन
यस्ता पनि भेटिए इमान्दार सांसद
देउवाले सिद्धान्त पोलेर खाएको आरोप, कांग्रेसी इतिहासकै ठूलो विद्रोह वैशाखमा